စကြဝဠာ DUKE NUKEM အဓိကအခန်းကဏ္ဍယောဟန် CENA နှင့်အတူရုပ်ရှင်ဖယ်ရှားပစ်မည် - သတင်း - 2019
ပြီးခဲ့သည့်ရာစု Duke Nukem ၏အများဆုံးမှတ်မိဂန္ shooters တစျဦး၏ရုပ်ရှင်လိုက်လျောညီထွေပြင်ဆင်နေဖွံ့ဖြိုးဆဲခွငျးဖွငျ့ဖွစျသညျ။ အဆိုပါစာရေးဆရာ "Deadpool" ၏စတိုင်အနက်ရောင်ဟာသနှင့်ပြောင်းလဲနေသောအရေးယူဂိမ်းနဲ့ပျော်စရာသည်းထိတ်ရင်ဖိုကတိပေး။
အဆိုပါစီမံကိန်းကိုအစောပိုင်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းအဆင့်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ပြီးသားရှုတ်ထွေးအချက်အလက်များနှင့်ကောလာဟလများမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်နိုင်ငံခြားစာပမြေားအရောင်းသွက်ထာဝစဉ်ကုဒ်-အမည်ရှိ, ဂီယာအုံ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်မူရင်းကောင်တာ Strike ခြင်းများနှင့် 2011 အတွက်စီးရီး Duke Nukem ၏ယိုယွင်းများအတွက်မသိ, ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်များယူကြောင်းတင်ပြထားပါတယ်။ ထုတ်လုပ်သူရဲ့ကုလားထိုင် Jean-ယူလနျြ Baron ကြာ, ပြီးသားကွန်ပျူတာဂိမ်း၏လိုက်လျောညီထွေအပေါ်လုပ်ဆောင်နေသည်မိမိကလောင်ကနေ 2016 ခုနှစ်မှာ Assasin ရဲ့ Creed စကွဝဠာများအတွက် "လူသတ်သမား Creed" ၏ပုံသို့ရောက်ကြ၏။
မူရင်း Duke Nukem ၏ကြံစည်မှုတစ်ဦးမတ်စောက်သောဘထွေး Duke Nukem ၏သောဇာတ်လမ်းတပုဒ်ကိုပြောပြ, ဂြိုလ်သားတိုက်ခိုက်နေ, အမေရိက၏မြို့ကြီးများရေလွှမ်း။ အပ်သောဇာတ်ကောင်နှင့်အတူ disassembly ပြီးနောက်အာကာသစခန်းတစ်ခုပြန်လာအလည်အပတ်ခရီးနှင့်အတူသူတို့အားမြန်မြန်။ အားလုံးလုပ်ဆောင်ချက်လက်တွေ့မအေးမြအရေးယူမှုနှင့် blackish ဟာသနှင့်အတူ seasoned ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားစာပမြေား၏အဆိုအရလာမည့်ရုပ်ရှင်လိုက်လျောညီထွေအတွက်ဦးဆောင်အခန်းကဏ္ဍဟာလူကြိုက်များပြိုင်ဖက်ယောဟနျသ Cena စဉ်းစားသည်။
အဆိုပါတပုဒ်ကဆရာယောဟနျ Cena အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးသြဇာပြိုင်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်တယ်များမှာ
Duke Nukem ၏မျက်နှာပြင်ဗားရှင်းကွန်ပျူတာဂိမ်းဝဠာပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားစီမံကိန်းများကိုတစ်အရေအတွက်က join ပါလိမ့်မယ်။ အစောပိုင်းကအလင်း၌များစွာသောအခြားသူတွေ "မြန်နှုန်းအဘို့အလို", "Warcraft", "Assassin ရဲ့ Creed", "Resident Evil" ကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Duke သူတို့ရဲ့အလှည့်အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ တခြားဘာကွန်ပျူတာဂိမ်း Universal သင်ကြီးမားသော format နဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုချင်ပါတယ်? သင့်ရဲ့မှတ်ချက်များကိုစွန့်ခွာခြင်းနှင့်လာမည့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းမှသင်၏မျှော်လင့်ချက်များမျှဝေပါ။
ဗီဒီယို Watch: JE SUIS LE MEILLEUR SORCIER DU MONDE ! Roblox Dungeon Quest (နိုဝင်ဘာလ 2019).